Maldives International Series 2019 မှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားနေပြန်တဲ့သက်ထားသူဇာ – Askstyle
အသက် ၂၁ နှစ်သာ ရှိသေးပေမဲ့ နိုင်ငံတကာကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ရွှေတံဆိပ် ၆ ခုထိ ရထားပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ထားသူကတော့ မိန်းမချောလေး သက်ထားသူဇာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…အသက်ငယ်ပေမဲ့ သူမရဲ့ ဇွဲ လုံ့လ ဝီရိယ နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်…
သူမကြောင့် မြန်မာ့ကြက်တောင်လောကကို လူတွေ ပိုစိတ်ဝင်စားလာစေတယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး….. ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၀၀ ထဲမှာ ရှိပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Myanmar International Series ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲမှာလည်း ပထမ မရခဲ့ပေမဲ့လည်း တတိယဆုရယူပြီး ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ဆုရသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…. ပထမဆုထိ မျှော်မှန်းထားခဲ့သော်လည်း တတိယဆုသာရတဲ့အပေါ် စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ သူ့ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း အားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်…
လတ်တလောယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့ သက်ထားသူဇာဟာ နောက်ထပ် နိုင်ငံတကာကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုလည်း သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ရှိနေပါတယ်…
အဲဒီပြိုင်ပွဲကတော့ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်ကနေ ၂၂ ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမယ့် Maldives International Future Series 2019 ပြိုင်ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါ့အပြင် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ၂၄ ရက်နေ့ကနေ ၂၉ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပမဲ့ Maldives International Challenge ပြိုင်ပွဲကို လည်း ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်….အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ သက်ထားသူဇာဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲ သာမက အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲမှာပါ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်….. နှစ်ယောက်တွဲပြိုင်ပွဲမှာတော့ မြန်မာ့ကြက်တောင်မယ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လှိုင်မွန်ကြူ နဲ့ တွဲဖက် ကစားသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲမှာ သက်ထားသူဇာဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အမြင့်ဆုံးကစားသမား ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါ့ကြောင့် ဗိုလ်ဆွဲဖို့ ရေပန်းစားနေပြီး ပြိုင်ပွဲကိုလည်း ဒုတိယအဆင့်ကနေ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်….. အဲဒီပွဲမှာ နိုင်ရင် ကွာတား၊ ဆီမီး၊ ဖိုင်နယ် စသဖြင့် တစ်ဆင့်ချင်း ယှဉ်ပြိုင်သွားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ဗိုလ်စွဲဖို့ အတွက် သက်ထားသူဇာဟာ ၄ ပွဲသာ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲရဲ့ ရေပန်းအစားဆုံး ကစားသမားဖြစ်တာကြောင့် ဒီပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ကိုထပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတာ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်အားပေးရမှာပါ….. သက်ထားသူဇာတစ်ယောက် ထပ်မံအောင်မြင်ပါစေလို့လည်း ကျနော်တို့ ဆုတောင်းပေးကြရအောင်နော်…
အသကျ ၂၁ နှဈသာ ရှိသေးပမေဲ့ နိုငျငံတကာကွကျတောငျပွိုငျပှဲတှမှော ရှတေံဆိပျ ၆ ခုထိ ရထားပွီး နိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျထားသူကတော့ မိနျးမခြောလေး သကျထားသူဇာပဲ ဖွဈပါတယျ…အသကျငယျပမေဲ့ သူမရဲ့ ဇှဲ လုံ့လ ဝီရိယ နိုငျငံအတှကျဂုဏျရှိအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျမှုကွောငျ့ ပရိသတျတှေ ခဈြခငျအားပေးသူ တဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ…
သူမကွောငျ့ မွနျမာ့ကွကျတောငျလောကကို လူတှေ ပိုစိတျဝငျစားလာစတေယျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး….. ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ၁၀၀ ထဲမှာ ရှိပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ Myanmar International Series ကွကျတောငျပွိုငျပှဲမှာလညျး ပထမ မရခဲ့ပမေဲ့လညျး တတိယဆုရယူပွီး ပွိုငျပှဲမှာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တဈဦးတညျးသော ဆုရသူဖွဈခဲ့ပါတယျ…. ပထမဆုထိ မြှျောမှနျးထားခဲ့သျောလညျး တတိယဆုသာရတဲ့အပျေါ စိတျဓာတျမကဖြို့ သူ့ကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး အားပေးစကားတှပွေောကွားခဲ့ပါတယျ…
လတျတလောယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲအပွီးမှာတော့ သကျထားသူဇာဟာ နောကျထပျ နိုငျငံတကာကွကျတောငျပွိုငျပှဲတဈခုကိုလညျး သှားရောကျယှဉျပွိုငျဖို့ ရှိနပေါတယျ…
အဲဒီပွိုငျပှဲကတော့ စကျတငျဘာလ ၁၇ ရကျကနေ ၂၂ ရကျနအေ့ထိကငျြးပသှားမယျ့ Maldives International Future Series 2019 ပွိုငျပှဲပဲ ဖွဈပါတယျ.. ဒါ့အပွငျ ဆကျတိုကျဆိုသလို ၂၄ ရကျနကေ့နေ ၂၉ ရကျနထေိ့ ကငျြးပမဲ့ Maldives International Challenge ပွိုငျပှဲကို လညျး ဆကျလကျယှဉျပွိုငျသှားမှာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ….အဲဒီပွိုငျပှဲမှာတော့ သကျထားသူဇာဟာ အမြိုးသမီးတဈဦးခငျြးပွိုငျပှဲ သာမက အမြိုးသမီး နှဈယောကျတှဲပွိုငျပှဲမှာပါ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမှာဖွဈပါတယျ….. နှဈယောကျတှဲပွိုငျပှဲမှာတော့ မွနျမာ့ကွကျတောငျမယျ တဈဦးဖွဈတဲ့ လှိုငျမှနျကွူ နဲ့ တှဲဖကျ ကစားသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
အဆိုပါပွိုငျပှဲမှာ သကျထားသူဇာဟာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့သတျမှတျခကျြ အမွငျ့ဆုံးကစားသမား ဖွဈပါတယျ.. ဒါ့ကွောငျ့ ဗိုလျဆှဲဖို့ ရပေနျးစားနပွေီး ပွိုငျပှဲကိုလညျး ဒုတိယအဆငျ့ကနေ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရခဲ့ပါတယျ….. အဲဒီပှဲမှာ နိုငျရငျ ကှာတား၊ ဆီမီး၊ ဖိုငျနယျ စသဖွငျ့ တဈဆငျ့ခငျြး ယှဉျပွိုငျသှားရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ…ဗိုလျစှဲဖို့ အတှကျ သကျထားသူဇာဟာ ၄ ပှဲသာ ယှဉျပွိုငျရမှာ ဖွဈပွီး ပွိုငျပှဲရဲ့ ရပေနျးအစားဆုံး ကစားသမားဖွဈတာကွောငျ့ ဒီပွိုငျပှဲမှာ နိုငျငံ့ဂုဏျကိုထပျဆောငျနိုငျမလားဆိုတာ ကနြျောတို့ စောငျ့ကွညျ့အားပေးရမှာပါ….. သကျထားသူဇာတဈယောကျ ထပျမံအောငျမွငျပါစလေို့လညျး ကနြျောတို့ ဆုတောငျးပေးကွရအောငျနျော…